10 Tilmaamaha Macluumaadka ee LinkedIn ee Ku Saabsan Guushaada Xiriirinta | Martech Zone
Faahfaahintan ka socota SalesforLife waxay diiradda saareysaa sida astaamaha 'LinkedIn' loogu hagaajin karo iibinta. Hagaag, feker ahaanteyda, astaan ​​kasta oo LinkedIn ah waa in lagu hagaajiyaa iibinta… haddii kale maxaad ugu jirtaa LinkedIn? Qiimaha aad ku leedahay xirfaddaada ayaa kaliya u qiimo badan sida shabakaddaada xirfadeed.
Taasi waxay tiri, waxaan rumeysanahay in dad badani waxyeello u geystaan ​​iyagoo ku xadgudbaya ama ka diidaya wax ka beddelidda astaanta 'LinkedIn'. Hal tababar oo aan runtii jeclaan lahaa inaan joojiyo ayaa isku dayaya inaan kula xiriiro dadka aadan aqoon. Waan garwaaqsanahay inaad raadineyso inaad kobciso shabakaddaada, laakiin casuumaad maran ma ahan macneheedu inaad sidaas sameyso. Igula xariir warbaahinta bulshada, wada hadal sii socdaba, ii sheeg sababta sababta isku xirnaantaadu qiimaha u leedahay - oo waxaan u badan tahay inaan isku xiro
Astaantaada 'LinkedIn' waa inaysan noqon dib-u-celintaada - maahan wax ku saabsan guulahaaga ama sidaad u jajabisay kootada. Taabadalkeed, waa inay noqotaa mid udub dhexaad u ah macaamiisha, diirada lasaarayo qiimaha aad kubixin karto rajada mustaqbalka iyo iibsadayaasha. Ka jawaab su'aashan: sideen u caawin karaa iibsadeyaasheyda? Waa tan sida loo farsameeyo astaanta guud ee 'LinkedIn' ee Iibinta Bulshada.
Sida Loo Kordhiyo Faahfaahintaada LinkedIn
Sawir Dhab ah - Kuma xirna kartoon ama sawirro madhan. Wejigaaga waa muuqaalka ugu caansan ee aad leedahay, ku dheji qadka. Waxaan ahay cirro, duq, dufan fat Weli sawirkeyga internetka ayaan galiyaa.
Cinwaankaaga - Cinwaanka jagadu kuma siinayo qiimaha aad dadka kale u keento. Ha dhaafin dulucda fadlan ha kadhigin inaad tahay milyaneer.
Daabac Tusmo - Sii soo-booqdayaasha mawduucyada la xiriira halkaasoo ay ku aqoonsan karaan khibraddaada aad ku dhex leedahay warshadahaaga.
Polish Kooban - Cinwaankaaga ayaa soo jiitay dareenkooda, hadda waa waqtigii la bixin lahaa xoogaa midab ah iyo wacitaan ficil ah.
La wadaag Mawduuca Muuqaalka - Markay booqdayaashu baaraan boggaaga, waxaad siisaa xoogaa muuqaal ah oo muuqaal ah oo soo jiidasho leh oo ka dhigaya astaantaada kuwa kale.
Khibrad u leh Natiijooyinka - Taariikhdaada shaqo kuma xirna inta badan natiijooyinka aad ka gaadhay jagooyinkaas.
Xanaanaynta - In kasta oo si xad dhaaf ah loo adeegsaday oo la qiimeeyay, astaan ​​aan la aqbalin maaha muuqaal ahaan soo jiidasho leh. Kaaga hel!
Talooyin - Si ka duwan oggolaanshaha, asxaab waqti u qaadata inay farsameeyaan talo soo jeedin mudan ayaa si aad ah qiimo u leh.
Kudar Daabacaad - Ma wax kale ayaad wax la wadaagaysaa oo wax ku qortay? Hubso inaad ku darto qaybahaas boggaaga LinkedIn si martida ay u heli karaan inay aqoonsadaan khibraddaada.
Maamuusta & Abaalmarinta - Waxaan ku noolnahay duni ay ka qaybgalkaaga bulsheed iyo bulsheed uu yahay qodob muhiim u ah go'aaminta qofka aad tahay. Haddii lagugu aqoonsaday, la wadaag.
Hubso inaad fiiriso astaantaada sida ay u arkeen dadweynaha iyo isku xirnaanta si aad u hagaajiso oo aad u hagaajiso astaantaada. Dhinaca midig, LinkedIn xitaa waxay bixisaa qiyaasta xooggaaga muuqaalkaaga… isticmaal! Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa inaad u cusbooneysiiso rukunka lacag bixinta ee LinkedIn. Marka laga reebo kala duwanaanta astaantaada iyo kordhinta muuqaalkeeda, waxay bixisaa aalado aad u wanaagsan oo lagu garto cidda fiirineysa astaantaada iyo sida aad ula xiriiri karto dadka kale.
Tags: infographicWaxyaabaha ku xiranku lifaaqanKhibrad la xiriirtacinwaanka linkedinisku xirnaanshahasawir kuxiranprofilein xiriir ahtalooyinka ku xidhaniibinta noloshaiibka nolosha